NJEHIE "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Nchọpụta nsogbu nke "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" njehie na Windows 7
Mepụta ndepụta na Microsoft Okwu nwere ike ịbụ nnọọ mfe, dị nnọọ ka ole na ole clicks. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe a na-enye gị ohere ịmepụta ndepụta ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ edere dị ka ị pịnyere, kamakwa iji gbanwee ederede nke etinyerelarị na listi.
N'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya otu esi eme ndepụta na Okwu.
Ihe omumu: Otu esi ede ederede na MS Word
Mepụta ndepụta ọhụụ ọhụrụ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ibipụta ederede nke kwesịrị ịdị n'ụdị listi echekwara, soro usoro ndị a:
1. Kọọ ọkwa na mmalite nke akara ebe mbụ nke ndepụta kwesịrị.
2. Na otu "Paragraf"nke dị na tab "Home"pịa bọtịnụ ahụ "Ndepụta ndepụta".
3. Tinye ihe mbụ nke ndepụta ọhụrụ, pịa "Tinye".
4. Tinye ntinye ihe mgbochi ọ bụla, pịa na njedebe nke ọ bụla "Tinye" (mgbe oge ma ọ bụ semicolon). Mgbe ịmechara ihe ikpeazụ, pịa okpukpu abụọ "Tinye" ma ọ bụ pịa "Tinye"na mgbe ahụ "BackSpace"ka ịpụ na ndepụta ndenye ndepụta ma nọgide na-ede.
Ihe omumu: Kedu ka esi jiri okwu dee ụdị ndepụta ahụ
Nweghari ederede zuru ezu iji depụta
N'ụzọ doro anya, ihe ọ bụla dị na ndepụta n'ọdịnihu ga-adị na ntinye dị iche. Ọ bụrụ na ederedebeghị ederede gị, mee nke a:
1. Kọọ ọkwa na njedebe nke okwu, ahịrịokwu ma ọ bụ ahịrịokwu, nke kwesịrị ịbụ ihe mbụ na ndepụta n'ọdịnihu.
2. Pịa "Tinye".
3. Tinyegharịa otu ihe ahụ maka isi ihe ndị na-esonụ.
4. Mepee otu ederede nke kwesịrị ịbụ ndepụta.
5. Na ngwa ngwa ịnweta mmanya na taabụ "Home" pịa bọtịnụ ahụ "Ndepụta ndepụta" (otu "Paragraf").
Ntuziaka: Ọ bụrụ na enweghị ederede mgbe listi echekwara ịmepụtara, pịa okpukpu abụọ "Tinye" na njedebe nke ihe ikpeazụ ma ọ bụ pịa "Tinye"na mgbe ahụ "BackSpace"iji wepu usoro okike ndepụta. Nọgidenụ na-edegharị ederede.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta listi ọgụgụ, ọ bụghị ndepụta echekwara, pịa "Ndepụta ọnụ"emi odude ke otu kiet "Paragraf" na taabụ "Home".
Ngbanwe mgbanwe mpaghara
Enwere ike ịgbanwe ya na aka ekpe ma ọ bụ aka nri, si otú a gbanwee "omimi" (ọkwa).
1. Mepee ndepụta nke mepụtara.
2. Pịa akụ na aka nri nke bọtịnụ ahụ. "Ndepụta ndepụta".
3. Na menu adaala, họrọ "Gbanwee nhazi ndepụta".
4. Họrọ ọkwa ịchọrọ ịtọ maka listi echekwara ịmepụtara.
Rịba ama: Ka ọkwa na-agbanwe, akara na ndepụta ahụ gbanwere. Anyị ga-akọwa n'okpuru ebe a ka ị ga-esi gbanwee ụdị nke ndepụta akara (ụdị ihe akara na mbụ).
Enwere ike ime ihe yiri nke ahụ site n'enyemaka nke igodo, na ụdị akara na nke a agaghị agbanwe.
Rịba ama: Utu acha uhie uhie na nseta ihuenyo gosipụtara taabụ mmalite maka listi echekwara.
Mepee ndepụta nke ọkwa ịchọrọ ịgbanwe, mee otu n'ime ihe ndị a:
Pịa igodo "TAB"iji mee ka nhazi dị elu (mee ka ọ gaa n'aka nri site na otu nkwụsị tab);
Pịa "SHIFT + TAB", ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwelata ọkwa, ya bụ, megharịa ya ka ọ "kwụpụ" n'aka ekpe.
Rịba ama: Otu keystroke (ma ọ bụ keystroke) na-agbanwe ndepụta site na otu taabụ nkwụsị. The "SHIFT + TAB" Nchikota ga-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ndepụta dị ma ọ dịkarịa ala otu tab na-akwụsị site n'akụkụ aka ekpe nke ibe.
Ihe omumu: Taabụ tab
Ịmepụta listi ọtụtụ ọkwa
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịmepụta listi agbado dị iche iche. Maka nkọwa ndị ọzọ banyere otu esi eme nke a, ị nwere ike ịmụta site na isiokwu anyị.
Ihe omumu: Otu esi emepụta ndepụta dị iche iche na Okwu ahụ
Gbanwee ụdị nke ndepụta ndepụta
Na mgbakwunye na ihe akara ọkọlọtọ e debere na mmalite nke ihe ọ bụla dị na listi ahụ, ị ​​nwere ike iji ihe odide ndị ọzọ dị na MS Okwu iji mee ya.
1. Mepee ndepụta nke echekwara nke ị chọrọ ịgbanwe.
3. Site na menu ndọpụta, họrọ ụdị akara akara kwesịrị ekwesị.
4. A ga-agbanwe ihe akara na listi ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ị naghị enwe afọ ojuju n'ụdị njirimara ndabara, ịnwere ike iji maka akara akara ọ bụla dị na mmemme ahụ ma ọ bụ foto nwere ike ịgbakwunye na kọmputa ma ọ bụ ibudata na Ịntanetị.
Ihe omumu: Fanye odide na Okwu
1. Mepee listi echekwara ma pịa akụ na nri nke bọtịnụ ahụ. "Ndepụta ndepụta".
2. Na menu adaala, họrọ "Kọwaa akara ọhụrụ".
3. Na windo nke mepee, rụọ ọrụ ndị dị mkpa:
Pịa bọtịnụ ahụ "Akara"ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu n'ime ihe odide na set nke ihe odide dị ka ihe akara;
Pịa bọtịnụ ahụ "Na-ese"ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ihe osise dịka akara;
Pịa bọtịnụ ahụ "Font" ma mee mgbanwe ndị dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwu ụdị nke akara ngosi ahụ site na iji ụdị nhazi ndị dị na mmemme ahụ. N'otu window ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe nha, agba na ụdị ide ederede ahụ.
Fanye ihe oyiyi n'ime Okwu
Gbanwee ederede na akwụkwọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ndepụta ahụ, mgbe ị na-ahapụ ederede ya, nke dị na paragraf ya, soro usoro ndị a.
1. Họrọ ederede niile na listi.
2. Pịa bọtịnụ ahụ "Ndepụta ndepụta" (otu "Paragraf"taabụ "Home").
3. Ịkọ ihe ga-apụ n'anya, ihe edere ederede nke ndepụta ahụ ga-anọgide.
Rịba ama: Ihe ndị a niile nwere ike ime na listi ederede ga-adaba na listi ọnụ.
Nke a niile, ugbu a, ị maara otú e si mepụta listi echekwara na Okwu ahụ ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ọkwa ya na ụdị ya.